လေးမြို့မြစ် ရေအားလျှပ်စစ် တရုတ် တည်ဆောက်မည် | Ko Oo + Ma Thandar
« ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ မြန်မာ နယ်စပ် အနီးတွင် ခေတ်မှီ လေတပ် အခြေစိုက် စခန်းတည်ဆောက်မည်
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ … »
လေးမြို့မြစ် ရေအားလျှပ်စစ် တရုတ် တည်ဆောက်မည်
စံလင်း – နိရဉ္စရာ
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း အကြီးမားဆုံး ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း တခုဖြစ်သည့် လေးမြို့မြစ် ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို တရုတ်က တည်ဆောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လေးမြို့လျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြောင့် ပျက်စီးသွားရမည့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်အလှများ
လေးမြို့မြစ်ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းအား တရုတ်ကုမ္ပဏီ Datang (Yunnan) United Hydropower Developing Co, Ltd က လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသွားပြီး မြန်မာ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်း ဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လေးမြို့မြစ် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အား စီမံကိန်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် တည်ဆောက်မည့် အကြီးဆုံး စီမံကိန်း ဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ် မဂ္ဂါဝပ်(၅၀၀) ထုတ်လုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း သဘာဝရေစီးများဖြင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် နေရာ ၆ ခုရှိပြီး ယခုအခါ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၃ ခုတည်ဆောက်နေပြီး ထိုအထဲတွင် သံတွဲ သူဌေး ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း၊ ဘူးသီးတောင် စိုင်းတင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနှင့် အမ်းချောင်း ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းတို့ ဖြစ်သည်။
စိုင်းတင်ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ယခုလက်ရှိ အနာဂတ်စွမ်းအင် ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း နောက်ဆုံး ရရှိသော သတင်းအရ စိုင်းတင်ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းကို ယခုအခါ ရပ်တန့်ထားသည်ဟု သိရသည်။
လေးမြို့မြစ် ရေအားလျှပ် စစ်စီမံကိန်းအတွက် တိုင်းတာမူများ ပြုလုပ်နေပြီး သက်ဆိုင်ရာမှ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် လုံခြုံရေး စခန်းများ တည်ဆောက်နေကြောင်း သိရသည်။
တိုင်းတာ မူများအရ လေးမြို့မြစ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှာ ရေစီးဝင် ဧရိယာမှာ ၂၅၂၆ စတုရန်းမိုင် ရှိပြီး အမြင့်ပေ ၂၄၆၀ ရှိကာ ၅၅၅၀ ပေမြင့်သော ချင်းတောင်တန်းမှ မြစ်ဖျားခံ စီးဆင်းပြီး စီမံကိန်း အကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် နေရာမြစ်ထဲသို့ ချောင်းလက်တက်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှ ရေများ အရှိန်အဟုန် ပြင်းစွာဖြင့် အခါမလပ် စီးဝင်နေကြောင်း သိရသည်။
လေးမြို့မြစ် ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အား စီမံကိန်းကြောင့် အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သူ လူထောင်ပေါင်းများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်သွားနိုင်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမူကိုလည်း အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်သူများက ပြောသည်။
ပန်းမြောင်းကျေးရွာမှ ဆရာတော်တစ်ပါးကလည်း လေးမြို့မြစ်တွင် နွေရာသီတွင် ရေများ ခမ်းခြောက် သွားသဖြင့် သောင်များ ပေါ်ထွန်းနေပြီး သင်္ဘောဖြင့် သွားလာ၍ မရတော့သည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်းနှင့် ယခုကဲ့သို့ အခြေအနေမျိုးတွင် လေးမြို့မြစ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအတွက် ရေကာတာ တည်ဆောက်ပါက လေးမြို့မြစ်အောက်ဘက်တွင် ရေများ ခမ်းခြောက်သွားနိုင်ပြီး ဒေသခံ ပြည်သူများကို အကြီးအကျယ် ပျက်စီး ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု ပြောသည်။
လေးမြို့မြစ်ရေအား လျှပ်စစ် စီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိသော ရေအား လျှပ်စစ်ကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံသို့ တင်ပို့ရောင်းချရန် မြန်မာ နအဖ စစ်အစိုးရနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အစိုးရ အကြား မူအားဖြင့် သဘောတူညီမူ ရရှိထားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တက်ကနက်မြို့နယ် တဘက်ကမ်း မောင်တောမြို့နယ်တွင် လျှပ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး ပင်မ ဓါတ်အားခွဲ ထရန်စဖေါ်မှာ စက်ရုံ တခုထားရှိပြီး ယင်းစက်ရုံမှ တဆင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့နိုင်ငံသို့ တင်သွင်းသွားမည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ စက်ရုံကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်မည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
This entry was posted on December 30, 2010 at 10:17 am and is filed under ဖြန့်ဝေခြင်း, News.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.